ဒူဒူကြီး: Insulation Class Rating
motor နဲ့ generator တို့ကိုယ်ထည်မှ name plate ကိုဖတ်ကြည့်ရင်၊ "Inc. Cl." လို့ အတိုကောက်ရေးထားတဲ့ insulation class ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးနဲ့ "Max. Amb." ဆိုပြီး၊ အတိုကောက်ရေးထားတဲ့ maximum ambient temperature ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးတို့ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
insulation class ရဲ့ နောက်မှာတော့ A, B, E, F နဲ့ H ဆိုတဲ့ အက္ခရာတွေ ကို၊ ရေးသားထားပြီး motor သို့မဟုတ် generator ရဲ့ insulation class rating ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ motor နဲ့ generator တို့ရဲ့ windings တွေမှာ၊ insulation အဖြစ် polyester, polyurethane နဲ့ polyvinyl အစရှိတဲ့ materials တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Motor stator winding phase insulation
insulation class rating ဟာ winding insulation တခုတည်းအတွက်၊ သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပဲ stator slots တွေရဲ့ liminations တွေအပါအဝင်၊ winding လို့ခေါါတဲ့ coil ထုတ်တွေ၊ တနည်းအားဖြင့် phase တခုနဲ့  တခုကြားမှာ၊ insulator အဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ materials တွေအတွက်ပါ၊ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ A, B, E, F နဲ့ H ဆိုတဲ့ insulation class rating ကိုယ်စားပြုတဲ့ အက္ခရာတွေကို A = 105 °C, B = 130 °C, E = 120 °C, F = 155 °C နဲ့ H = 180 °C ဆိုပြီး၊ maximum allowable temperature တွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ maximum allowable temperature ဟာ maximum continuous temperature rating ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ temperature rating အတွင်းမှာသာ၊ motor နဲ့ generator တို့ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ temperature rating ထက် ပိုမိုကျော်လွန်ပြီး excess temperature မှာ အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ winding insulation တွေ ပျက်စီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
(၁၉၆၀) ခုနှစ်အထိ motor နဲ့ generator တွေမှာ Class A insulation rating windings တွေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ (၁၉၆၀) ခုနှစ် အလွန်ကစပြီး Class B insulation windings တွေကို စတင် အသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ application requirements အရ၊ Class E, Class F နဲ့ Class H insulation rating windings တွေကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ motor သို့မဟုတ် generator တွေကို၊ load တင်ပြီးမောင်းနှင် အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ winding resistance ကြောင့် temperature မြင့်တက် လာပါတယ်။ winding မှာမြင့်တက် လာတဲ့ rise temperature ကို၊ full load allowable temperature rise လို့ခေါါပါတယ်။ winding တွေမှာ safety factor အနေနဲ့ excess temperature allowance အဖြစ်၊ hot spot temperature တန်ဘိုး တခုကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ insulation class rating အမျိုးအစားအလိုက် hot spot temperature တန်ဘိုး ဟာ၊ winding တခုနဲ့တခု မတူညီတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ insulation class rating ဟာ၊ maximum ambient temperature ဆိုတဲ့ surrounding air temperature နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Insulation Class Rating = Maximum allowable Temperature (°C) = Full Load Allowable Temperature Rise (°C) + Ambient Temperature (°C) + Hot Spot Temperature (°C)
Fig. Insulation Class rating
insulation class rating ဆိုတဲ့၊ Maximum allowable Temperature ဟာ၊ winding မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့်၊ Full Load Allowable Temperature Rise, surrounding air temperature ဆိုတဲ့ Ambient Temperature နဲ့ winding ရဲ့ safety factor တနည်းအားဖြင့် excess temperature allowance ဆိုတဲ့၊ Hot Spot Temperature စတဲ့၊ temperature တန်ဘိုး (၃) ခုရဲ့ စုစုပေါင်း တန်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်။
motor သို့မဟုတ် generator တွေကို၊ over load condition မှာအသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ windings တွေလောင်ကျွမ်းပျက်စီး သွားနိုင်ပါတယ်။ load တက်လာတဲ့အခါ၊ winding resistance ပါတက်လာပြီး၊ winding temperature ပါမြင့်တက် လာပါတယ်။ winding အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ insulation class rating တနည်းအားဖြင့် maximum allowable temperature တန်ဘိုးထက်၊ ကျော်လွန် သွားတဲ့ အခါ၊ အပူလွန်ပြီး windings တွေလောင်ကျွမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။
winding တွေလောင်ကျွမ်းပျက်စီးမှုကိုခွဲခြားကြည့်လျှင် (၁) winding single phase failure, (၂) winding shorted phase to phase failure, (၃) winding shorted turn to turn failure, (၄) winding with shorted coil failure, (၅) winding grounded at edge of slot failure, (၆) winding grounded in slot failure, (၇) winding shorted connection failure, (၈) phase damage due to unbalance failure, (၉) winding damage due to over load failure, (၁၀) winding damage due to locked rotor နဲ့ (၁၁) winding damage due to voltage surge ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Star connection winding single phase failure
Fig. Delta connection winding single phase failure
star နဲ့ delta motor winding တွေမှာ၊ phase တခုခြင်းစီအတွက်ပေးရမယ့်၊ supply voltage တွေထဲမှ၊ တခုဟာ phase တခု တနည်းအားဖြင့် winding coil တခုကို၊ supply မပေးနိုင်တော့တဲ့ အခါ၊ အခြား winding တွေမှာ အပူလွန်ပြီး၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းကို single phase failure လို့ခေါါပါတယ်။
Fig. Winding shorted phase-to-Phase failure
Fig. Winding shorted turn-to-turn failure
winding shorted phase-to-Phase failure နဲ့ winding shorted turn-to-turn failure လို၊ winding ပျက်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတွေ ကတော့၊ contaminants ဆိုတဲ့ ပြင်ပမှ liquid particles တွေဝင်ရောက်ခြင်း၊ foreign bodies လို့ခေါါတဲ့ ပြင်ပမှ၊ solid particles တွေဝင်ရောက်ရာမှ abrasion ဆိုတဲ့ winding insulation တွေပေါက်ပြဲခြင်း၊ vibration နဲ့ voltage surges တို့ကြောင့် winding insulation တွေ ကွာကျခြင်း၊ တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားရပါတယ်။
Fig. Winding with shorted coil failure
Fig. Winding grounded at edge of slot failure
Fig. Winding grounded in slot failure
Fig. Winding shorted connection failure
အလားတူ winding with shorted coil failure, winding grounded at edge of slot failure, winding grounded in slot failure နဲ့ winding shorted connection failure အစရှိတဲ့ winding insulation failure တွေဟာလည်း၊ contaminants, abrasion, vibration or voltage surges ဆိုတဲ့၊ ပြင်ပမှ liquid particles တွေဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြင်ပမှ၊ solid particles တွေဝင်ရောက်ခြင်း၊ vibration နဲ့ voltage surges တို့ကြောင့် winding insulation တွေ ကွာကျခြင်း၊ တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားရပါတယ်။
Fig. Winding damage due to unbalance failure
winding သို့မဟုတ် phase တခုခြင်းစီအတွက်ပေးသွင်းရမယ့်၊ supply voltage တွေရဲ့ တန်ဘိုးဟာတခုနဲ့ တခု တူညီဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ phase တခုခုကို၊ unbalanced voltage အနေနဲ့ပေးသွင်းခဲ့လျှင်၊ winding insulation မှာ thermal deterioration ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ winding တွေလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ (၁) % ခန့် voltage unbalance ဟာ motor မှာ (၆) % မှ (၁၀) % ခန့်အထိ current unbalance ဖြစ်ပေါါစေတာကိုတွေ့ရ ပါတယ်။
Fig. Winding damage due to over load failure
အလားတူ over load condition မှာအသုံးပြုခဲ့လျှင်လည်း၊ winding insulation မှာ thermal deterioration ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ winding တွေလောင်ကျွမ်းပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
Fig. Winding damage due to locked rotor
load ကြောင့် excessive starts အနေနဲ့ စတင်ရုန်းပြီးလည်ရတဲ့အခါတွေနဲ့၊ တခါတရံ reversals အနေနဲ့ ရုတ်တရက်ပြောင်းပြန်လည်ရတဲ့ အခါတွေမှာ၊ rotor ဟာ locked ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ မလည် နိုင်တော့တဲ့ locked rotor ကြောင့် winding မှာ high current ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ thermal deterioration မှတဆင့်၊ winding တွေလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
Fig. Winding damage due to voltage surge
switching power circuits, lightining strikes, capacitor discharges နဲ့ solid state power devices တွေကြောင့်၊ voltage surge ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ voltage surge ဟာ winding insulation ကို thermal deterioration ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
Image credit to : http://pinellaselectricmotor.com/, http://www.marineinsight.com/, http://globuselectric.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 02:32